खेलिबस्छु खेल कति: एक पठन | विचार सङ्कलन
म पाठकले पढ्दैछ यसरी – कसले किन हाम्रो छानामा ढुङ्गा हानेको? हेत्वाभास(कारण अन्सार काट्नु)का कति तरङ्ग मच्चन्छन्, कोइरालाको ‘शत्रु’ कथा लेखकको लेखनमा, पाठकको पठनमा ध्वनित हुँदै। भनौं ‘शत्रु’ र यो कथा पाठकले सँगसँगै पढ्छन्। ‘अन्तर्पाठ्यता’ (Intertextuality) भनिएको छ यसलाई। यस लेखनपठनकर्मले साहित्यमा र जीवनमा सधैँ मेटिने ‘विगतको वर्तमानता’ (Presence of the past) प्रति सचेत गराउँछ हामीलाई। अन्तर्पाठ्यताको उत्तराधुनिक यो एक उपयोगिता।
‘पेटमा अचानक एउटा चल्मल थाहा पाउँछु यतिखेर नै। असीम पीडाको बोधसँगै घोंच्दै ’round र घचेटिँदै पनि उँभो मुखतिर आइरहेको केही – ‘केही’। केहीक्षणमै एउटा स्वरुप मुख च्यात्दै बाहिर छाद्छु ‘ह्वाल्ल’। झन्डै बेहोशिएको अवस्थामा देखिरहन्छु त्यो स्वरुप अर्थात प्र.लाई, जो मभित्र मेरै रगत पिएर बाँच्छ र मसँगसँगै घटबढ हुँदै गइरहन्छ। अनि यस्तै एकान्तमा मलाई उसको भ्रमको सास्ती दिन बाहिर आउँछ।’
अलिक सानो स्वरमा उसले रहस्य खोल्छ – ‘’emलाई तिम्रो पछाडि लगाइएका छन्। बुझ्यौ?’
प्र.को प्रगटन पनि र अलिखित उपन्यासका तीन कल्पित पात्रले कथाकारमाथि जासुसी गर्नु साम्भविक (याथार्थिक) तुल्याई विवरण छ। असाम्भविक (अयाथार्थिक)को स्वैरकल्पना र यथार्थको यस्तो मिश्रणलाई ‘जादुमय यथार्थ’ (Magical Realism) भनिएको छ (यूरोपियहरु विश्वास गर्न गाह्रो यथार्त घटना जुनैलाई पनि ‘म्याजिक’ भनिहाल्छन्)। कथाकारको ‘दुखेसो मेरो घरको छानामा ढुङ्गा हानियो आज राति’, सुनेर प्र. हाँस्छ, हाँसिसकेर भन्छ – ‘आज ’emलाई यसो गर्न ठीक लाग्दैछ। भोलि त्यसलाई सम्झेर किन गरेछु पनि लाग्नेछ।’ मुखमा उसको कऱ्यापकऱ्याप बझ्छ अक्षर, फेरि भन्छ, ‘त्यसरी नै विभिन्न प्रकार्यहरु नै वाहक हो व्यर्थताको।’
धारणा, विचार, निष्कर्षको अनिस्चितता र अस्थिरता (सदालाई निर्धार्य कुनै सत्य छैन) बोध गराउनमाथि साङ्केतिक ‘’em’ सके ती पात्र तीन हुन्, तीनमा कुनै हो छानामा ढुङ्गा हान्ने। यसो भए कथा थालनीदेखि जादुमय यथार्थ छ।
वास्तविक, वैयक्तिक र सामाजिक भ्रान्तिको खेल लेख्ने हामी (कृष्ण धरावासी, रत्नमणि नेपाल, कृष्ण बराल, कुमार भट्टराई, दुर्गा विनय, म……भेर अनुकरणात्मक (Mimetic) लेख्थ्यौं, कृतिको कथनीय (भन्ने कुरा) पात्रहरुका मुखबाट परोक्षतः भनाउँथ्यौं, कार्यबाट दर्शाउँथ्यौं। पारम्परिक लेखनविधि। आख्यानमा पात्रले पात्रको रुपमा, लेखकले लेखकको रुपमा, पाठकले पाठकको रुपमा प्रत्यक्षतः बोल्ने वक्तव्यात्मक (Didactic) लेखन निकै गऱ्यौं।
यहाँ अलिकति व्याख्या आवश्यक होला :पृथ्वीमा मानवजाति नभएको बेलामा पनि वस्तुहरु थिए, घटनाहरु भइरहन्थे। ती वस्तु, घटनाका त्यसबेला कुनै नाम, अर्थ, भाव, मूल्य लागेका हुँदैनथे। नाम र विशेषणबिनाका तीहरु केवल आफ्नै नयता वा यायावत्यमा, आफ्नै ‘वस्तुता’मा रहिरहन्थे। आज पनि ती यथार्थमा त्यस्तै छन्, सधैँ त्यस्तै रहनेछन्। मानिसले मात्र आत्मपरकतापूर्वक तीहरुमा नाम, अर्थ, मूल्य, भाव जोडिदिन्छन्। आयामिक धारणाको वस्तुताबाट लीलाबोधमा वस्तुपरक तीहरुलाई ‘तथ्य’ र ‘नाम’, मूल्यादिलाई मानवसापेक्ष ‘सत्य’ भन्यौं। युरोपीय अब प्रचलित लेखनमा हाम्रा तथ्यलाई ‘घटना’ (Event) र सत्यलाई ‘तथ्य’ (Fact) भनेका पायौं। कथाकार भन्छन्, घटना (इवेन्ट)को कुनै निश्चित अर्थादि छैन तर हामी मानिसले त्यसमा कुनै निश्चित अर्थादि टाँस्न खोज्छौं र नै अनेक आत्मपरक भ्रान्ति सृष्ट बन्छन्। यसमा ‘स्मृति’ उत्तिकै सहपराधी छ। अघि कुनै वस्तु वा घटना प्रियप्रिय लागेको भावात्मक स्मृति (एमोसनल मेमरी) स्मृति सधैँ भावात्मक हुन्छ – मानिसको मस्तिष्कमा रहेको सानो बदामगेडी आकारको तन्तु Amygdala मा सङ्गरहित हुन्छ। स्मृति तर प्रायशः नै चयनित, प्रवर्धित पनि हुँदा भ्रान्तिकर हुन्छ।
कथाकार प्र.बाटको सतर्कतापछि, रुपान्तरण (मेटामर्फसिस) लक्षित छ, तर कीरा (कर्म पात्र) देखि मानिस (कर्ता पात्र) मा। उसले त्यो खेल अब ‘मेरो खेल’ मान्छ र खेल्छ। उसको स्वतन्त्र कर्तव्य पनि तर भर्म विश्लेषित हुन्छ। बाह्यिक (भौतिक, जागतिक) र आन्तरिक (मानसिक, व्यक्तिक) निर्धारक तत्वहरु (Determinants)लको अन्तरक्रियात्म खेल। आन्तरिक निर्धारकहरुमा पस्चिमीय फ्रायडवाद, पूर्वीय त्रैगुण्य आदि पर्छन्। उसले तीन पात्रलाई चिनिने, ’emका (चरित्रसित नभनौं) कार्यसित मिल्दा अनुहार दिन्छ मनैमन। साँच्चै एकदिन गान्तोकको एमजी मार्गको घचारोमा उसले ती अनुहारका तीनलाई वा तीनले भेट्छन् तिनलाई। तीनले तिनलाई जासुसी कथाको पारामा अपहरण (किड्न्याप) गरेर पुऱ्याउँछन् सहरबाहिरको जङ्गलमाझको एउटा ‘हरर’ सिनेमाको झैं घरमा। उत्तरआधुनिकतावादी आख्यानमा स्वीकृत पप (पप्युलर) लेखनको समावेशनले अच्च र निम्न साहित्यिक लेखनको श्रेणीभेदलाई हाँक छ। लेखकले खेलिरहेको खेल थाहा गर्नोस् – काल्पनिक कथारुपको सर्जनले विचार, भाव, मूल्यहरुका स्थापन र विस्थापनको शून्यात्मक खेल।
लेखकले जानेरै कति शब्दको भूल हिज्जे, वाक्यमा भल व्याकरण लेखेरै कति कथा लेखेका छन्। अझ भाषामाथि उत्तरआधुनिक जिज्ञासा राख्छन् – ‘शब्दहरुले आआफ्नै आनुभूतिक प्रक्षेपहरुको चक्रव्यूह बुनिएको भ्रम छ। …..संवेदन वा बोधको अमूर्तता त्याग्दै शब्दहरुले शब्दहरु मिली स्वरुपको संसार एउटा रचिदिन्छ।’ भाषासित हाम्रो जीवन, वैयक्तिक र सामाजिक गाँसिन्छ र यो प्राणप्रिय बन्छ नत्र भाषा कृत्रिम वाचिक सूचनप्रणाली र दक्षता हो, सचेत गराइन्छ।
यस कथामा पारम्परिक कथारुपहरु भन्दा अनेक तत्व समाविष्ट छन्। पढ्दा बगैँचा डुलाइएको भन्दा जङ्गल घुमाइएको लाग्छ। अनेक रङका थोप्लाहरु भएको फकुन्डा हल्लाउँदा अर्कै नयाँ रङको देखिन्छ। त्यो दृश्यरङलाई भर्तृहरि चित्ररुप भन्छन्, कृतिमा प्रविधि, कृतिको संरचना कृतिकारले देखेको यथार्थ्यका प्रतिबिम्बक हुन्छन्, रुपक हुन्छन्। यीबाट खुट्टिन्छ कृतिकारको जगददृष्टि। यी सबबाटका तत्त्वहरु परेको यस कथाको चित्ररुप भिन्न बनेको छ। फकुन्डाको प्रत्येक चित्ररुपले अलग नामकरण माग्छ तर समुचित नाम शब्द छैनन्। नीलोजस्तो, बैगनीजस्तो भन्नुपर्छ। यो कथाको विशेष चित्ररुपले अलग विधानाम माग्छ। समुचित शब्द छैन। कथाजस्तो भन्नपर्छ। र अब हामी कथाजस्तो, उपन्यासजस्तो, नाटकजस्तो, कविताजस्तो इत्यादि जस्ता विधाहरुको समयमा पस्दैछौं।